Siyaqonda ukuba ubumfihlo kwi-Intanethi kubalulekile kubasebenzisi beSayithi yethu, ngakumbi xa siqhuba ishishini. Le ngxelo ilawula imigaqo-nkqubo yethu yabucala ngokubhekisele kwabo basebenzisi beSiza (abatyeleli) abatyelela ngaphandle kokwenza ishishini kunye nabakhenkethi ababhalisela ukwenza ishishini kwiSayithi kwaye basebenzise iinkonzo ezahlukeneyo ezinikezelwa nguAguas-tmad (ngokudibeneyo, iiNkonzo) ( AbaThengi abagunyazisiweyo).
Ipeyinti yendlu yezikim zombala
Ulwazi oluchongiweyo lomntu oluqokelelwe yiAguas-tmad lugcinwa ngokukhuselekileyo kwaye alufikeleleki kubantu besithathu okanye abasebenzi baseAguas-tmad ngaphandle kokusetyenziswa njengoko kubonisiwe ngasentla.
U-Aguas-tmad ulusebenzisa njani ulwazi lokungena?
I-Aguas-tmad isebenzisa ulwazi lokungena, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho, iidilesi ze-IP, ii-ISPs, kunye neentlobo zebrawuza, ukuhlalutya imikhwa, ukulawula iSayithi, ukulandelela intshukumo yomsebenzisi kunye nokusetyenziswa, kunye nokuqokelela ulwazi olubanzi lwabantu.
I-Aguas-tmad ingene kwaye iya kuqhubeka nokungena kubambiswano kunye nezinye izinto ezinxulumene nenani labathengisi. Abathengisi abanjalo banokufikelela kulwazi oluthile oluchongiweyo ngesidingo sokwazi isiseko sokuvavanya abaThengi abagunyazisiweyo ukufaneleka kwenkonzo. Umgaqo-nkqubo wethu wabucala awugubungeli ingqokelela yabo okanye ukusetyenziswa kolwazi. Ukubhengezwa koLwazi oluChongiweyo lomntu ukuthobela umthetho. Siza kuchaza uLwazi oluchongiweyo lomntu ukuze sihambisane nomyalelo wenkundla okanye isamani okanye isicelo esivela kwi-arhente yokunyanzeliswa komthetho ukuba sikhuphe ulwazi. Siza kuphinda siveze uLwazi oluChongiweyo lwaBantu xa kufanelekile ukukhusela abaKhenkethi bethu kunye nabaThengi abagunyazisiweyo.
iimbiza ezincinci zeceramic
ithayile yeendonga zangasese
iithayile zanamhlanje zekhitshi
usapho lwekrisimesi kwifama
izimvo ezincinci zephepha lodonga lokuhlambela
igumbi lokulala elingwevu nelimhlophe
udonga entabeni yokutshaja isikhululo